“Industirii maxxansaaf mootummaan xiyyeeffannoo hinkennine” -Obbo Takkaa Abbaadii
“Industirii maxxansaaf mootummaan xiyyeeffannoo hinkennine” -Obbo Takkaa Abbaadii Featured
Mirgaa gara bitaatti, Obbo Takkaa Abaadiifi Dr Girmaa Amante
Finfinnee: Biyya ummata miliyoona 100tti siqu qabduufi kanneen keessaa barattoota miiliyoona 25 ta'an keessatti warshaan waraqaa lama qofaan jiraachuun qaanii guddaadha.
Sababa kanaan immoo warshaaleen waraqaa kunniin fedhii biyya keessa jiruun tasuma kan walsimuu hindandeenye yommuu ta'u, hanga ammaatti fedhii biyya keessaa dhibbanta 10 qofa guutan.
Harki caalu immoo dhibbantaan 90 waraqaan biyyattii keessatti tajaajila garaa garaatiif oolu sharafa alaa olaanaa ta'een alarraa biyyoota akka Hindii irraa bitamaa jira. Rakkoon sharafa alaa biyyattii keessatti uumame osoo kanaan jiru ammas bittaa waraqaatiif sharafni alaa itti fufnaan biyyattiin rakkoo hamaa keessaa galuu kan dandeessu ta'utu himama.
Hunda caalaa garuu paalmiin omisha waraqaatiif barbaachisu hundi hanga ammaatti biyya alaa irraa gatii qaaliin bitamaa jiraachuun mootummaan damee maxxansaa kanaaf xiyyeeffannoo kan hinkennine ta'uu kan agarsiisu ta'uu Gaggeessaan Hoji Dhaabbata Maxxansaa Biraaninnaa Salaam Obbo Takkaa Abaadii ni ibsu.
Sagantaa marii haala indastirii maxxansaa fooyyeessuun danda'amurratti taa'ameen, qaamotni hojii walitti hidhamiinsa qabu irratti bobba'an bifa bittinaa'aa ta'een adeemuunsaanii biyyattii rakkoo keessa agalchaa jiraachutu himame.
Sababa waraqaan alarraa bitamuuf gatiin gaazexaa, barruuleefi kitaabbilee Itoophiyaa keessatti yeroorraa yerootti dabalaa jiraachuu kan himan Obbo Takkaan, kun immoo mirga lammiileen biyyattii odeeffannoo barbaadan argachuuf qabanis kan sarbu ta'uu dubbatu.
Biyyootuma ollaa kanneen akka Keeniyaafi Ugaandaa keessatti gaazeexaan kuma 200-300 ta'u guyyaa guyyaan maxxanfamee ummata biyyattii bira kan ga'u yemmuu ta'u, biyya keenyatti garuu inni umrii waggaa 75 ol qabu gaazexaan Addis zaman hanga ammaatti kuma 15 ta'uunsaa rakkoo damee maxxansaa biyyattiin keessa jirtuuf ragaa ta'uu ibsu.
Ga'een dameen maxxansaa guddina biyya tokkootiif qabu olaanaa ta'uusaa kan himan immoo Ministirri Ministeera Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa Dr Girmaa Amantee, kanarraa ka'uudhaan rakkoolee hanga ammaatti osoo hinfuramin walirra tuulamuudhaan damee kana quucarsaa jiran furuuf sochiin eegalamuusaa dubbatu.
Dhaabbanni maxxansaa waggaa 96 lakkofsiise Birhaaninna Salaam hanga yeroo dhihootti kaappitaallisaa qarshii miiliyoona saddeet qofa turuusaa eeranii, wayitii ammaa sochii taasifameen kaappitaalli dhaabbaticha gara qarshii biiliyoona 1.5 tti ol guddisuun kan danda'ame ta'uu himu. Dhaabbilee barnoota olaanoo 44 biyyattii keessatti argaman keessaa teeknooloojii maxxansaatiin leenjii kan kennu tokkos hinargamne.
Torban kana/This_Week 10600
Torban darbe/This_Month 96957
Guyyaa mara/All_Days 1435380